Indha cade oo Weerar ku qaaday Dowlada Imaaraatka Carabta – Daily Som
Indha cade oo Weerar ku qaaday Dowlada Imaaraatka Carabta
By Staff on April 20, 2018 No Comment
waxaa sii badanayaya siyaasiyiinta iyo dadwaynaha si xowlaiga ah uga hadlaya xiisad siyaasadeedka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Imaaraatka taas oo gaartay meeshii ugu xumeed ebad.
Yuusuf Maxamed siyaad indhacade oo ka mid ah militariga Soomaaliya xilal kala duwane ka soo qabtay Dowladahii dalka Soomalray wixii ka dambeeyay burburka iyo xoogag islaamiga ee ka talin jiray Koofurta soomaaliya, ayaa sheegay in imaaraatka uu lugooyo ba’an uu ku haayo soomaaliya.
sheekh yuusuf ayaa sheegay in imaaraatka ay soomaaliya utimid qaab Hinaaso ama maseer ah, taas oo ay kaga daynaso dowlada Turkiga oo uu sheegay in ay tahay dowlad soomaaliya usoo gurmatay xili loo baahnaa dunida ka jeesatay.
“Waxaan aaminsanahay Imaaraatka marka la eego hab dhaqankooda dalkeena lugooyo mooyee faa’iido ah kuma qabin, waxay keeni jireen dawooyin dhacay iyo raashin aan wanaagsaneyn, dadka Soomaaliyeed ee dagaalada ku dhinta waxaa ka badan kuwa Imaaraadku sida dadban u dilo, waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliya oo iska diiday quursiga iyo dhaqan xumada Imaaraadka, waxaana heli doona dowladdo ka wanaagsan oo inoo bedela” ayuu yiri.
sidoo kale waxa sheegay in ay soomaalida ogthay waxa uu utartay Dowlada Turkiga, isla markaana ay ka maseersantahay dowladaas, asiga oo sheegay in UAE ayna noo yeerin karin cida aan la saaxiibeeyno iyo cidi aan la coloobayno, waxaa kale oo uu ku daray hadalkiisa in turkiga oo aan ka helno kaalmo ka badan koodo uuna fara galin ku samayn Gudaha Soomaaliya.
“Turkiga oo la ogyahay kaalmada uu Soomaaliya siiyo, wax fara gelin ah kuma haayo siyaasada Wadanka, laakiin nimankan imaaraadka la leeyahay waxayba rabaan iney dowladeena u yeeriyaan cida ay la saaxiibeyso iyo cida ay la coloobeyso, waxay kaloo rabaan iney u dhaqmaan siday doonaan, arimahaas oo dhana wax la aqbali karo maaha” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Indhacadde.
Indha cade oo Weerar ku qaaday Dowlada Imaaraatka Carabta added by Staff on April 20, 2018